Thwebula Simple Disable Key 11.9 – Vessoft
WindowsUhleloIzandisoSimple Disable Key
Ikhasi elisemthethweni: Simple Disable Key
Ikhubaza i-Key elula – isofthiwe yokukhubaza noma isebenze okhiye abacacisiwe ekhibhodi. Isofthiwe ingakhubaza noma yiziphi izinkinobho noma inhlanganisela yabo, kufaka phakathi okhiye bokulawula njenge "Ctrl", "Alt", "Shift", "Windows", njll. Ukukhubaza okulula okukhiphayo okucacile ukucacisa ukhiye noma ukuhlanganiswa nezinye izihluthulelo nokukhetha izinketho zokukhubaza: njalo, uma uqhuba izinhlelo zokusebenza, ngokusho kwesikhashana. Isofthiwe ivimbela ukusebenzisa okhiye kufayela elihleliwe elihlelekile noma ngesikhathi esimisiwe nezinsuku ezicacisiwe. Ukukhubaza okukhiye okulula kuhlanganisa zonke izinkinobho ezikhutshaziwe ohlwini ongashintsha ngayo imodi yokukhubaza futhi ubuke zonke izinkinobho ezikhiyiwe kanye nezinhlanganisela zabo. Ukukhubaza okuKhiye okulula kukuvumela ukuthi ulungise ukukhubazeka okuzenzekelayo okhiye abakhethiwe ngemuva kokuthi i-Windows iqale, noma khubaza noma usebenze okhiye ngesandla kusuka kulayini wesistimu.
Ukukhubaza izihluthulelo nezinhlanganisela eziyinhloko
Ivimbela ukusetshenziswa kwezinkinobho kuzinhlelo zokusebenza
Ukukhubaza okhiye kuhlelo
Ukukhubaza okuzenzakalelayo okhiye emva kokuqalisa i-Windows
Thwebula Simple Disable Key
Amazwana ku Simple Disable Key
Simple Disable Key software ehlobene